Semalt: WordPress Plugin कसरी स्थापना गर्ने भन्नेमा शुरुआतका लागि गाईड
यो दिशानिर्देश केवल तीहरु लाई लागू हुन्छ जो wordpress.org प्रयोग गर्दैछन्। मानिसहरु लाई wordpress.com प्रयोग गर्नका लागि, यसको केहि सीमितताका कारण प्लगइनहरू स्थापना गर्न असम्भव छ। प्लगइनहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुन स्व-होस्ट गरिएको wordpress.org वेबसाइट सिर्जना गर्न यो आवश्यक छ। त्यहाँ धेरै विधिहरू छन् जसको माध्यमबाट कसैले wp प्लगइन स्थापना गर्न सक्दछ। उदाहरण को लागी, तपाइँ एक WordPress WordPress प्लगइन स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई खोज कन्सोलमा खोजी गरेर, यसलाई अपलोड गरेर वा WTP प्लगइन FTP प्रयोग गरेर स्थापना गरेर।
Artem Abgarian देखि एक शीर्ष विशेषज्ञ यी सुझावहरू पालन Semalt , र तपाईं पक्का लागि सफल हुनेछ।
१. WordPress प्लगइन खोजी प्रयोग गरी wp प्लगइन स्थापना गर्नुहोस्
डब्ल्यूपीपी प्लगइन स्थापना गर्ने सब भन्दा सिधा विधिहरू यो खोजी कन्सोलमा खोजीको माध्यमबाट हो। यो विकल्पको साथ तपाईले धेरै प्लगइनहरूको पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन वर्डप्रेस प्लगइन डाइरेक्टरीमा उपस्थित छन्। तपाइँ कुनै खोज क्वेरीमा कुञ्जी गर्न सक्नुहुन्छ र एक प्लगइन फेला पार्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको आवश्यकता अनुसार मिल्दछ। जब तपाईं यसलाई स्थापना गर्नुहुन्छ, WordPress ले यसलाई डाउनलोड गर्दछ र तपाईंको लागि सेट गर्दछ। जब प्रक्रिया सफल हुन्छ, तपाइँ प्लगइन सक्रिय गर्ने एक पुष्टिकरण सन्देश प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईं प्लगइन स्थापनाकर्तामा पनि फर्कन सक्नुहुनेछ।
एक प्लगइन काम गर्नका लागि, तपाईंले यसलाई सक्रिय गर्न याद गर्नुपर्दछ। यो पनि याद गर्नु आवश्यक छ कि सबै प्लगइनहरूको बिभिन्न सेटिंग्स हुन्छन्। यसको मतलब यो हो कि त्यहाँ बिभिन्न तरिकाहरू छन् जुन उनीहरूलाई कन्फिगर गर्नु आवश्यक छ। यी विधिहरू यस दिशानिर्देशमा कभर हुने छैन। यस दृष्टिकोणको एक कन्न्स भनेको तपाईं केवल फ्रि प्लगइनहरू स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। केहि अनौंठो परिस्थितिहरूमा तपाईले यस डाइरेक्टरीमा प्लगइन उपलब्ध नभएको स्थापना गर्नु पर्ने हुन सक्छ।
२. वर्डप्रेस प्रशासन प्लगइन अपलोड प्रयोग गरी wp प्लगइन स्थापना गर्नुहोस्
केहि केसहरूमा तपाईले आफ्नो डब्ल्यूपी वेबसाइटमा सशुल्क प्लगइनहरू स्थापना गर्नु पर्ने हुन सक्छ। यस अवस्थामा, खोजी कन्सोलले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दैन। WordPress को व्यवस्थापक क्षेत्रमा अपलोड सेवा छ जुन तपाईंलाई यसको कन्सोलमा प्लगइन स्थापना गर्न अनुमति दिन सक्छ। तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्लगइन डाउनलोड गर्न आवश्यक छ। त्यस पछि, तपाईले आफ्नो wp-admin ट्याबमा लगईन गर्न आवश्यक पर्दछ, प्लगइनहरूमा जानुहोस् र नयाँ पृष्ठ थप्नुहोस्।
यस बिन्दुबाट तपाईं अपलोड प्लगइन बटन क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको पीसी डाइरेक्टरीबाट यो फाईल अपलोड गर्नुहोस्। WordPress तपाइँको लागि यो प्लगइन अपलोड र स्थापना गर्दछ। माथिको विधि जस्तै, एक सफल स्थापना पछि, तपाईं प्लगइन सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ वा प्लगइन पृष्ठमा फर्कन सक्नुहुनेछ। सबै सेटिंग्स प्लगइन को डिजाइन को अनुकूलित छ।
Man. मैन्युअल्ली FTP प्रयोग गरी एक WordPress प्लगइन स्थापना गर्नुहोस्
केहि विशेष अवसरहरूमा, तपाइँको wp होस्टिंग प्रदायकसँग केहि फाईल प्रतिबन्धहरू हुन सक्छ जुन प्रशासक क्षेत्रबाट प्लगइन स्थापना गर्ने लचिलोपनलाई सीमित गर्न सक्दछ। यस अवस्थामा, FTP मार्फत wp प्लगइन स्थापना गर्नु उत्तम विकल्प हो। शुरुआतीहरूले पनि सजीलै FTP प्रबन्धकलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछन्। सबै भन्दा पहिले, तपाइँ डाउनलोड र तपाइँको कम्प्युटर मा तपाइँको प्लगइन को zip फाइल झिक्नु पर्छ। यस बिन्दुबाट तपाईले प्लगइन अपलोड गर्न आवश्यक पर्दछ WP होस्टिंग सर्वरमा FTP क्लाइन्ट प्रयोग गरेर। तपाइँको wp होस्टिंग प्रदाता तपाइँको वेबसाइट को लागी एक FTP प्रबन्धक प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक FTP प्रबन्धक मा, तपाईं यो पथ / wp-सामग्री / प्लगइन / तपाईंको सर्वरको निर्देशिका मा थप्न सक्नुहुन्छ।